12 N’ikpeazụ, Samuel gwara Izrel dum, sị: “Lee, egewo m ntị n’olu unu n’ihe niile unu gwara m,+ ka m mee ka eze chịwa unu.+ 2 Ugbu a, lee eze ahụ ka ọ na-eje ije n’ihu unu!+ Mụ onwe m emewo agadi+ ma chaa isi awọ́,+ lee, ụmụ m nọkwa n’etiti unu,+ mụ onwe m ejewokwa ije n’ihu unu malite mgbe m bụ nwata ruo taa.+ 3 Leenụ m. Gbaanụ akaebe megide m n’ihu Jehova nakwa n’ihu onye o tere mmanụ:+ Ehi ònye ka m kpụụrụ, ka ọ̀ bụ ịnyịnya ibu onye ka m kpụụrụ,+ ka ọ̀ bụ onye ka m rigburu, ka ọ̀ bụ onye ka m chiri ọnụ n’ala, ka ọ̀ bụ onye ka m naara ego aka azụ ka m wee jiri ya mechie anya m?+ M ga-enyeghachikwa ya unu.”+ 4 Ha wee sị: “I rigbughị anyị, i chighịkwa anyị ọnụ n’ala, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla ma ọlị ị naara onye ọ bụla.”+ 5 O wee sị ha: “Jehova bụ onye akaebe megide unu, onye o tere mmanụ+ bụkwa onye akaebe taa na unu ahụghị ihe ọ bụla n’aka m.”+ Ha wee sị: “Ọ bụ onye akaebe.” 6 Samuel wee sị ndị Izrel: “Jehova bụ onye akaebe, bụ́ onye ji Mozis na Erọn rụọ ọrụ, onye sikwa n’ala Ijipt kpọpụta nna nna unu hà.+ 7 Ugbu a, guzoronụ, m ga-ekpekwa unu ikpe n’ihu Jehova wee kọọrọ unu ọrụ ezi omume+ niile Jehova rụụrụ unu na nna nna unu hà. 8 “Ngwa ngwa Jekọb batara n’Ijipt,+ nna nna unu hà malitere ịkpọku Jehova maka enyemaka,+ Jehova wee zipụ Mozis+ na Erọn, ka ha dupụta nna nna unu hà n’Ijipt ma mee ka ha biri n’ebe a.+ 9 Ha wee chefuo Jehova bụ́ Chineke ha,+ nke mere na o weere ha resị+ Sisera+ bụ́ onyeisi ndị agha Hezọ na ndị Filistia+ na eze Moab,+ ha wee na-ebuso ndị Izrel agha. 10 Ha wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere ha aka,+ sị, ‘Anyị emehiewo,+ n’ihi na anyị ahapụwo Jehova wee fee Bel+ na ihe oyiyi Ashtọret+ ofufe; ugbu a kwa, napụta+ anyị n’aka ndị iro anyị, ka anyị wee jeere gị ozi.’ 11 Jehova wee zipụ Jerọbel+ na Bidan na Jefta+ na Samuel+ wee napụta unu n’aka ndị iro unu gbaa gburugburu, ka unu wee biri n’obi iru ala.+ 12 Mgbe unu hụrụ na Nehash,+ bụ́ eze ụmụ Amọn abịawo ibuso unu agha, unu nọ na-asị m, ‘Ee e, kama ọ bụ eze ga na-achị anyị!’+ ma n’oge ahụ niile, ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu bụ Eze unu.+ 13 Ugbu a, lee eze unu họọrọ, bụ́ onye unu kwuru ka e nye unu;+ lee, Jehova emewo ka eze na-achị unu.+ 14 Ọ bụrụ na unu atụọ egwu Jehova+ ma jeere ya ozi,+ rubekwa isi n’ihe o kwuru,+ unu agharakwa inupụ isi+ n’iwu Jehova, ma unu ma eze unu nke ga-achị unu ga-abụ ndị na-eso Jehova bụ́ Chineke unu. 15 Ma ọ bụrụ na unu erubeghị isi n’ihe Jehova kwuru,+ wee nupụ isi n’iwu Jehova,+ aka Jehova ga-ebili megide unu na nna unu hà.+ 16 Ugbu a kwa, guzoronụ hụ oké ihe a nke Jehova na-eme n’ihu unu. 17 Ọ̀ bụ na taa abụghị ụbọchị owuwe ihe ubi+ ọka wit? M ga-akpọku+ Jehova ka o mee ka égbè eluigwe gbaa, meekwa ka mmiri zoo;+ mgbe ahụ, unu ga-amara ma hụ na ihe ọjọọ unu mere n’anya Jehova dị ukwuu+ site n’ịsị ka e nye unu eze.” 18 Samuel wee kpọkuo Jehova,+ Jehova wee mee ka égbè eluigwe gbaa, meekwa ka mmiri zoo n’ụbọchị ahụ,+ ndị Izrel niile wee tụọ Jehova na Samuel egwu nke ukwuu. 19 Mmadụ niile wee malite ịgwa Samuel, sị: “Kpekuo Jehova bụ́ Chineke gị ekpere+ maka ndị ohu gị, n’ihi na anyị achọghị ịnwụ; n’ihi na anyị atụkwasịwo ihe ọjọọ n’elu mmehie anyị niile site n’ịrịọ ka e nye anyị eze.” 20 Samuel wee sị ndị Izrel: “Unu atụla egwu.+ Unu onwe unu emewo ihe ọjọọ a dum. Ma unu ahapụkwala iso Jehova,+ jirikwanụ obi unu dum+ jeere Jehova ozi. 21 Unu agakwala soro ihe efu+ ndị na-abaghị uru ọ bụla,+ ndị na-adịghịkwa anapụta mmadụ, n’ihi na ha bụ ihe efu. 22 N’ihi na Jehova agaghị agbahapụ+ ndị ya n’ihi aha ukwu ya,+ n’ihi na Jehova ekpebiwo ime ka unu bụrụ ndị ya.+ 23 Tụfịakwa! Mụ onwe m agaghị emehie Jehova site n’ịkwụsị ikpe ekpere maka unu;+ m ga-ezikwa+ unu ụzọ dị mma,+ nke ziri ezi. 24 Naanị tụọnụ egwu+ Jehova, jirikwanụ obi unu dum+ jeere ya ozi n’eziokwu; n’ihi na leenụ oké ihe ndị o meere unu.+ 25 Ma ọ bụrụ na unu ejiri ikwesi olu ike mee ihe ọjọọ, a ga-ekpochapụ unu,+ ma unu ma eze unu.”+